Noocyada Tattoo: Dugsiga Old | Tattoo
Tattoo Style: Dugsi Hore
Ku sii wadida taxanaheena maqaallada oo aan dooneyno inaan kugu soo bandhigno asalka iyo isbeddelka qaababka kala duwan ee tatooyada (qeybteenii hore waxaan uga hadalnay qaab macquul ah), maanta waxaan diirada saari doonaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan maanta iyo, dhanka kale, wuxuu leeyahay taariikh weyn taariikhda taatikada lafteeda taas oo saameyn ku yeelatay in qaabkan farshaxanka ah laga dhigo sida ay tahay maanta. Taasi waa sax, waan ka hadlaynaa qaab tattoo dugsiga jir, sidoo kale loo yaqaan "Iskuulkii Hore" o «Tattoo-ga caadiga ah».
Inkasta oo tattoo lafteeda ay ka weyn tahay 3.000 sano (in kasta oo ay xitaa ka sii weynaan karto), Marka laga hadlayo qaabkii hore ee qaab dhismeedka dugsiga ee loo yaqaan 'tattoo tattoo' waa inaan dib ugu laabannaa sannadka 1.900 iyo gaar ahaan labada shay ee Mareykanka. Qaabkani wuxuu ku dhex dhashay badmaaxiinta kuwaas oo, si ay uga soocaan kuwa kale (kuwa aan yareyn), doonayay inay yeeshaan wax aad u shakhsi ah oo ka duwan.
Wuxuu ku dhex dhashay qeybaha hoose ee bulshada Mareykanka xilli tattoo wali la aaminsanyahay kaliya Hindida, badmaaxiinta iyo dhillooyinka. Waxaase la yaab leh, aristocrats badan ayaa sidoo kale is-sawiray si ay maqaarkooda ugu qabsadaan meelaha kala fog ee adduunka ee ay booqdeen. Waxa xiisaha lihi, intii lagu jiray tobannaan sano ee ugu horreeyay noloshiisa, qaabkan loo yaqaan 'tattoo' waxaa loo yaqaanay "Tattoo Mareykan ah", laakiin ka dib waqtiga, iyo inuu yahay qaab taariikhi ah oo wali sii jira, waxaa caan ku ahaa Old School.
1 Maxaa lagu gartaa qaabkii hore ee tattoo dugsiga?
2 Sawirro loogu talagalay Tattoos Dugsi Hore
Maxaa lagu gartaa qaabkii hore ee tattoo dugsiga?
Qaabkii hore ee tattoo dugsiga waxaa lagu gartaa dhowr arrimood oo si wanaagsan loo qeexay. Dhinac waxaan leenahay khadad cufan oo qeexaya astaamaha iyo midabada fidsan isla waqtigaas oo aad u muuqda. Qaar ka mid ah walxaha ugu badan ee lagu xardho qaabkan oo caan ah oo aan ka heli karno istuudiyaha istuudiyaha adduunka oo dhan waa liqitaan, daggida, astaamaha badda, ubaxyada ama dhakada.
Ilaa maanta iyo inkasta oo uu yahay mid ka mid ah qaababka ugu da'da weyn, tattoo-kii hore ee dugsigu weli waa mid ka mid ah kuwa ugu baahida badan. Moodooyin badan oo caan ku ah pin-up ayaa doortay qaabkan si ay u qurxiyaan jirkooda. Dib u milicso, fanaaniinta ugu caansan taariikhda qaabkan waa: Sailor Jerry (1911-1973), Herbert Hoffmann (1919-2010), Amund Dietzel (1891-1974), Bert Grimm (1900-1985) iyo Bob Shaw (1926-1993).
Sawirro loogu talagalay Tattoos Dugsi Hore
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo Style: Dugsi Hore
Qaabka aan ugu jeclahay 🙂
Jawaab Ronal Cuevas
Noocyada Tattoo: Dugsi Cusub
Tattoo mootooyinka, loogu talagalay kuwa jecel laba giraangiraha!